Ciyaaraha maanta iyo walwalka Spain - BBC News Somali
Ciyaaraha maanta iyo walwalka Spain
25 Juunyo 2010
Maanta waxaa qorsheysan affartii ciyaaroood ee u dambeeyey wareega kowaad tartanka kubbada cagta adduunka ee ka socda dalka Konfur Afrika. Labakulan waxa ey khuseyaan group-kaG, labada kalena group-kaH.
Wareega G oo kulamadooda ey isku mar qabsoomidoonaan saacadda Bariga Afrikamarka ey tahay shanta galabnimo, ayaa ciyaar mid waxa ey dhex mari doonta Brazil iyo Portugal, waxaana ey isku arkidoonaan gegida Moses Mabhida Stadiumee ku taal magaalada Durban.
Ciyaarta kale oo dhex mari doonta NorthKorea iyo Ivory Coast, waxa ey ka dhici doonta gegida magaaladaNelspruit Mbombela Stadium.
Group-kakan, waxaa lix dhibcood ku hoggaamineysa Brazil, oo horeba u sharciyeysatay u gudubka wareega xiga, marka loo fiiriyo dhibcaha u xareysan.Waxaa ku xigta kooxda qaranka portugal oo leh affar dhibcood. Ivory Coast dhibic ayey leedahay. Waxaa dhibco la’aan ah North korea oo xisaabiyaan ka hartay wareega kowaad.
Group-ka kale ee H oo ka kooban Chile,Spain, Switzerland iyo Honduras waxaa ciyaarahooda la ballamiyey sagaalka iyo barka habeenimo waqtiga Geeska Afrika.
Ciyaar waxa ey ka dhici doonta, gegida magaalada Pretoria Loftus Versfeld Stadium, halkaasi oo ey ku kulmi doonaan Chile iyo Spain. Waxaana isla waqtigaas ciyaari doona, Switzerland iyo Hondurs, oo isku arki doona gegida Free State Stadiumee magaalada Bloemfontein.
Wareegakan waxaa lix dhibcood ku hoggaamineysa Chile. Waxaana ku xiga Spain iyo Switzerland oo min saddex dhibcood leh. Waxaa ugu hooseysa oo aan wax dhibic ah laheyn Honduras.
Qolada wadnaha farta ku heysa group-kan waa Spain oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyn adduunka , oo hadii ey guuldarreysato oo ciyaarta caawa ey ku badiso Chile, islamarkaasna Switzerland ka adkaato Honduras, ka hari doonta ciyaaraha adduunka, iyado mari doontana jidkii ey mareen Fransiiska iyo Talyaaniga.